Mareykanka oo ciidamadiisa dib ugu soo celiyay Somaliya (SAWIRRO) | Dhacdo
Mareykanka oo ciidamadiisa dib ugu soo celiyay Somaliya (SAWIRRO)
Madaxweyne Joe Biden ayaa toddobaadyo ka dib Ciidamada Mareykanka dib ugu soo celiyay Somaliya, ka dib markii Maamulkii Madaxweyne Donald Trump uu amray in dalka laga saaro.
Diyaarad kuwa militariga ayaa maanta ciidamadan ka soo dejisay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, waxaana la fillayaa inay dib uga hawlgalaan Garoonka Ballidoogle ee Gobolka Shabellaha Hoose, halkaasoo uu ku yaalo saldhigga ugu weyn ee Ciidamada Mareykanka ee dalka ku sugan ka hawlgalaan.
Ciidamadan oo boqolaal askari gaaraya ayaa la arkayay iyagoo ka soo deggaya diyaaraddii militariga ee ka soo cago dhigatay Garoonka Aadan Cadde.
Ciidamada Mareykanka ayaa dalka ugu soo laabtay, sidii ay u sii wadi doonaan hawlgalada ka dhanka ah kooxaha argagixisada iyo tababarada ay siiyaan Ciidamada Dowladda.
Xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka ayaa bartamihii bishii January sheegtay in Madaxweynaha cusub uu hagaajin doono xiriirka labada dal.
Ilhaan Cumar oo la hadashay BBC, waxna laga weydiiyay siyaasadda Madaxweyne Biden ee arrimaha ciidamada ayaa sheegtay in Madaxweynuhu uu is bedelo waaweyn la imaan doono sanadkan, isla-markaana uu Aqalka Cad kala shaqayn doono Somaliya dib u soo celinta xasilloonida.
Mareykanka waa dalka keliya ee duqeymaha joogtada ka fuliya deegaanada ay maamulaan maleeshiyada Al Shabaab, oo ka biyo diidan jiritaanka Dowladda Federaalka iyo jooggitaanka dalka ee Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.